MIBVUNZO - Guangzhou Asiaprint Industrial Co, Ltd.
Nei Uchisarudza Asiaprint?
1. Anopfuura makore 19+ ruzivo.
2. Ipai OEM, ODM sevhisi.
3. Yakanakisa yedhijitari tecnology rutsigiro - dzivisa matambudziko panguva yekugadzira.
4. Iva nenyanzvi yekupa online, vhidhiyo, pa-saiti mushure mekutengesa sevhisi.
Chii chiri chinangwa chemuchina wekupisa?
Muchina wekupisa ndiwo muchina unodzvanya kuendesa kune inopfuudzwa substrate. Uchishandisa tembiricha yakakwira uye kumanikidza kwakamanikidza kweimwe nguva yakati rebei, iko kuendesa kunosimbiswa zvachose muchigadzirwa.
Michina yekudziya inokurudzirwa kune hunyanzvi uye hunogutsa mhedzisiro nekuda kwekuti zviyero zvakaomeswa zvekumesa uye simbi dzemaoko hazvigone kusvika padhuze netembiricha inodiwa pakuendesa kwakatendeka.
Ko pamusoro Unhu Finished Machine?
Yese michina yekupisa yekupisa yakanyatso kuyedzwa pasi peanotevera maitiro usati waendesa kunze.
Batidza muchina wekudhinda wekupisa, rega upise kusvika pa220 degree Celsius; Wobva washandisa nhema kuendesa mapepa bvunzo kupurinda machira. kupisa kupisa muchina
Ndingawana sei rumwe ruzivo kubva kwauri?
Unogona kutumira eamil, fax kana kufonera isu. Izvo zvinogona kutendwa neako skype ID, whatsapp ID, Webchat ID kana imwe SNS.
Yakasarudzika bvunza zvemachina?
OEM / ODM sevhisi zvakanaka, kugadzirwa kwekutakura kunoenderana neyako dhizaini.
Pane vakagadzirira imwe vhidhiyo inokudzidzisa iwe kuungana nekuisa nhanho nhanho.
Injiniya inowanikwa kushandira mhiri kwemakungwa here?
Hongu, asi mari yekufambisa inobhadharwa newe. Saka chaizvo kuchengetedza yako mutengo, isu tinokutumira iwe vhidhiyo yeizere ruzivo muchina kumisikidza uye kukubatsira iwe kusvika kumagumo.
Ndingaite sei kuti ndiongorore mhando isati yatumirwa?
Tichatora mufananidzo nevhidhiyo kukuratidza, chii chine kurongedza mumakatoni uye chinotaridzika.
Kana ndine dambudziko rehunyanzvi, ungatibatsira sei kurigadzirisa?
Tsananguro yakadzama, mapikicha kana vhidhiyo zvinobatsira nyanzvi yedu kuongorora dambudziko uye nekupa mhinduro maererano. Tinogona kutaura online kutaura maitiro ekuita.
Ndeipi nzira yako yekubhadhara?
Nzira yekubhadhara ndeye T / T (Wire Transfer) kana LC, PAYPAL, Western Union nezvimwewo zvinoenderana nemusiyano wenyika.
Zvakadii neMuchina Warranty yako?
Mwedzi gumi nembiri garandi yemachina edu. Munguva yewarandi nguva, isu tinotumira emahara zvikamu zvekutsiva (wedunhu mabhodhi) nepo zvakaputsika zvikamu zvinofanirwa kudzoserwa kumashure.
Tinogona here kutumira nyanzvi yedu kufekitori yako kunodzidziswa?
Ehe, unogamuchirwa neushamwari kutishanyira kuti tidzidzise mahara.